I-57 YOYILO LWESIQITHI SEKHITSHI (IMIFANEKISO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi I-57 yoyilo lweSiqithi seKhitshi (Imifanekiso)
Wamkelekile kwigalari yoyilo lweziqithi zasekhitshini. Le mifanekiso yasekhitshini inezinto ezahlukeneyo zokuyilwa, kunye nezitayile. Uzakufumana iikhitshi zangoku, zelizwe, zenguqu kunye nezesiko. Iziqithi zibonelela ngee-countertops ezifana ne-marble, i-jewel tone granite, kunye nebhloko yendalo. Ukongezwa kwesiqithi kuyindlela elungileyo yokwandisa indawo yokupheka ukuze usebenze ngokukuko. Siyathemba ukuba le mifanekiso ikunika uninzi lweengcamango kunye nenkuthazo yeeprojekthi zakho zasekhitshini.
benza ntoni abacwangcisi bomtshato
Oku ikhitshi lokuvula ngumzekelo obalaseleyo woyilo lwesitayile esihle sotshintsho. Ngeendonga ezingwevu ezikhanyayo kunye neekhabhathi zekhitshi ezimhlophe ezicocekileyo, iyakwazi ukudibanisa ukulula koyilo lwala maxesha kunye nemigca ehle kakhulu yoyilo loyilo lwasekhitshini. Embindini wekhitshi kukho isiqithi esikhulu sekhitshi esilinganayo kunye nenqanaba lendawo ekhoyo. Kanye nje ngeekhabhathi eziphambili, inesiseko esimhlophe esimhlophe sesitayile kwaye sine-Juparana granite counter top, songeza ipateni yendalo kwindawo.
Imifanekiso yeeIqithi zeKhitshi
Isiqithi seKhitshi laseQuartz
Isiqithi seKhitshi kunye neMarble ephezulu
Isiqithi seKhitshi kunye neGranite ephezulu
Isiqithi seKhitshi kunye neTop Top
Iikhitshi zesitayile sotshintsho zihlala zidibanisa ezimhlophe kunye nezimnyama, kunye neendonga ezimhlophe kunye neekhabhathi ezingwevu okanye ngokuchaseneyo. Eli khitshi, kwelinye icala, liya kuyo yonke inkqubo yombala ongwevu, lisebenzisa umthunzi ofanayo wokungwevu kokukhanya kuzo zombini iindonga kunye neekhabhathi zekhitshi. Ikhitshi, nangona kunjalo, isebenzisa umnyama omnyama wekhitshi elaminethiweyo kwisiseko sekhabhathi yayo, isebenzisa i-mahogany emnyama endaweni yegrey ekhanyayo, iyenza ibonakale ngaphandle kwekhitshi. Imiphezulu yeetafile steel stainless ziyasebenza kwaye ziyathandeka. Inezitulo zebar zeBertoia ezintathu, ukwandisa ukusetyenziswa kwesiqithi esikhulu sekhitshi kwindawo yokulungiselela kunye nokutya.
Ukuya kwiskimu sombala esimnyama, eli khitshi linika i-vibe eyomeleleyo kunye nesibindi. Iikhabhathi zonke zisekugqibeni kwe-mahogany yendalo kwaye ziyiphakamisa ngombala omnyama nobomvu we-Indian Dakota granite. Umbala uhambelana kakuhle nokugqitywa kwekhabinethi kwaye ugqibezela ukugqitywa kwesilingi kwindawo yeziko lekhitshi. Isiqithi sasekhitshini sixande kunye nokugqiba okufanayo kunye nekhabhathi eziphambili, kodwa sisebenzisa ikhawuntari ebomvu ebomvu ye-Indian Dakota.
Inkqubo emhlophe emhlophe yeli khitshi yenza ukuba ibonakale intle kwaye ingaphelelwa lixesha, ngakumbi njengoko imigangatho kwisithuba se-mahogany emnyama, yenza umhlaba omhlophe ubonakale. Isiqithi sekhitshi elixande lide kwaye lincinci kwaye linendawo emhlophe yokubala kunye nendawo eninzi yokugcina. Ikwahlalisa nezitulo zebar ezintathu ezikwi-ebony emnyama ekugqibeleni, esenza umahluko omkhulu ngokuchasene nesiqithi esimhlophe sekhitshi.
Esi siqithi sasekhitshini sisiqwenga somdla. Iineekhabhathi ezimhlophe ezipeyintwe ngohlobo olufanayo nezona khabhathi ziphambili zekhitshi, kodwa zisebenzisa into yokuhombisa ebabazekayo, edibanisa ibhloko yemabhile kunye neenkuni. Umanyano lwezi zixhobo zimbini luvelisa umphumo owahlukileyo kunye nokwamkelwa okwahlukeneyo kwendawo.
Iikhitshi zesitayile sotshintsho zihlala zisebenzisa umbala omhlophe kunye nomhlophe, kwaye lo mzekelo usibonisa ikhitshi yesitayile setshintsho esisebenzisa ifomula yesiqhelo yezitayile ezinjalo. Isebenzisa iikhabhathi eziphambili ezimhlophe kunye nekhawuntara yemarble ngaphezulu kunye nokongeza imfudumalo, isebenzisa iithayile zendlela engaphantsi kwendlela. Kwisiqithi, sisebenzisa imxinwa kwaye Isiqithi eside sekhitshi esinendawo yokuhlala , Isiseko esingwevu kunye nekhawuntara yemarble phezulu. Isiqithi sekhitshi sisebenza ikakhulu njengendawo eyongezelelweyo yokulungiselela kwaye sinendawo yokulwa ibar.
Esi sithuba siyindibaniselwano yeziqwenga zefenitshala ye-rustic yanamhlanje. Imigangatho yamaplanga e-antiqued kunye ne-trusses evezwe ngomthi ibeka indawo ekhathazayo kunye ne-rustic kwindawo, ngelixa ubunjani bomthi kunye neethayile ekhitshini zibonisa uyilo lwento eyenziweyo. Uza kubona isiqithi esikhulu sekhitshi esine-slab entle emhlophe emhlophe. Isebenzisa iiplanga zomthi ohlanguliweyo njengee-aksenti kwisiseko sayo, kwaye igqibezela isiseko esiphambili ngomlotha omnyama, isenza ukuba sifane nesinyithi esikhulileyo okanye ikhonkrithi. Uyakubona izitulo zokutyela zakudala ezinento yokwenza nezinto ezenziwe ngesikhumba, kunye nezitulo zala maxesha zevelvet.
Eli khitshi linomtsalane weklasikhi welizwe ekhitshini kodwa ugcina ucocekile kwaye ucocekile uziva ngathi ziindawo zangoku zekhitshi. Isebenzisa indibaniselwano yeekhabinethi ezigqityiweyo ezahlukeneyo, ukudala imibala eyahlukeneyo kunye nokugqitywa kwisithuba esinye. Iphaneli ephakanyisiweyo iikhabhathi zekrimu Zidwelisiwe kuyo yonke indawo ngokudityaniswa kwababhaki beenkuni kunye neziqithi ezinamabala amnyama.
Zimbini iziqithi zasekhitshini kolu luyilo, enye isetyenziselwa ubukhulu becala ukugcina indawo yokusebenza, ngelixa esinye isiqithi esiphakeme sekhitshi sisebenza ikakhulu njengebhawuntara yokutya. Ukusetyenziswa kwe-walnut kunye ne-cherry wood ngokwahlukeneyo kwaye zombini zenziwe nge-Carrara marble.
Ubungakanani kunye nesitayile sale khitshi imele uyilo olwenziweyo lwesitayile sotshintsho lwekhitshi. Imigangatho ye-oki emnyama idityaniswe nodonga olumhlophe olungasasebenziyo njengekhitshi leli khitshi, ngelixa iikhabhathi ziya kugqibe umhlophe njengesiqhelo, ziphakamise ngegranite emnyama kwaye zizibhangise ngeethayile zendlela ezingwevu ezikhanyayo zangasemva. Isiqithi sekhitshi sikhulu, kodwa silingana nobungakanani bendawo kunye nokuphakama kwesilingi, kuyenza ibonakale ilingana nekhitshi liphela. Endaweni yegranite emnyama nangona kunjalo, isebenzisa imabhile emhlophe kwaye ngasekunene kwayo kuxhonywe izibane ezihonjisiweyo zekheji ukuze zenze isandi.
Eli khitshi lanamhlanje linobume obukhethekileyo obuvulekileyo, uhlengahlengiso kumagophe ukwenza uyilo olwahlukileyo nolunamandla. Iikhabhathi zasekhitshini zisisiseko - zenziwe ngombala we-walnut omnyama kwaye zine-granite emnyama nemhlophe. Nangona kunjalo, inesiqithi esikhethekileyo sekhitshi. Isiqithi sasekhitshini sincinci kwaye sinesangqa esimile kwaye sinesinki ekhethekileyo yamatye eyakhelwe ngaphakathi.
Udonga lokugcina ikhitshi lude, kwaye ke nesiqithi sekhitshi. Isithuba sodonga lwale khitshi sasetyenziswa kakhulu njengendawo yokugcina, ke oko kukushiya nesiqithi sekhitshi kwindawo yakho yokulungiselela / indawo yokulungiselela. Ngenxa yobude besiqithi, kukho indawo eyoneleyo yokufumana iimfuno zokupheka komhlaba, kunye nokubonelela ngokugcina. Iya kujonga ngakumbi, ngokusebenzisa iikhabhathi ezimnyama ezi-laminated kunye ne-top top counter counter.
Eli khitshi lisebenzisa ukugqibezela okukhethekileyo kwe-laminate kunye neenkozo zeenkuni ezithe tyaba ekugqityeni i-walnut Ikhitshi linokukhanyisa kwendalo okwaneleyo, kunciphisa isidingo sezibane ezingezizo ngexesha lasemini. Iyakwazi ukwandisa indawo ekhoyo yodonga yokugcina. Isiqithi sasekhitshini simxinwa kwaye sinxande kwaye sisebenzisa ukugqitywa kwelaminathi efanayo neekhabhathi eziphambili. Yenziwe nge-quartz emnyama ephezulu kwaye ikwabonelela ngendawo yokutya / izitulo zebar.
Iifestile ezinkulu zemifanekiso zibonelela ngokukhanya okwaneleyo kwendalo, kunye nokubonelela ngombono omangalisayo wendawo yangasemva, ukuseta imeko yendalo kunye nokuphumla kwindawo. Ikhitshi njengokubukeka okwangoku, kunye neendonga ezimhlophe ezimhlophe kunye ne-bamboo flooring, ebeka imvelaphi enhle yokungathathi hlangothi. Iikhabhathi zasekhitshini zalaminishwa kwi-wengue emnyama zaza zayixhoma ngegreyite grey juparana. Uluhlu lwehabhu lubekwe embindini wesiqithi sekhitshi, ukuvumela umsebenzisi ukuba alungiselele ukutya ngelixa esonwabisa iindwendwe njengoko zibekwe ngqo kwindawo yokutyela.
Ikhitshi elithandekayo lesiko lesiko elisebenzisa iikhabhathi ezimhlophe ezifusiweyo ngokudibeneyo kunye neminyango yekhabhinethi yaseFrance ukuthelekisa uyilo lwefestile yaseFrance. Iikhabhathi zabekwa ngokuchasene neendonga ezingwevu ze-lilac zaze zafakwa imabhile emhlophe yeCarrara enemigqa yegolide. Isiqithi sekhitshi sikhulu kwaye sixande, ubukhulu becala sisebenza njengaphezulu komsebenzi, ukugcinwa kunye nendawo yokutyela ehlala abantu abane ngexesha. Esi siqithi sasekhitshini sigxininiswa zizibane ezijikelezileyo zezibane zangoku, zisinika ukukhanya okufudumeleyo okuhle.
yintoni isipho esihle somtshato
Ilitye lekalika eliqaqambileyo elihle lithatha indawo yokuphambili kule khitshi iphefumlelweyo. Isebenzisa imodeli yeklasikhi kunye nephaneli eneenkcukacha ukunika ikhitshi yemveli ukujonga, kwaye uyipeyinte ngombala omhlophe ukunika ukubukeka okudala. Umbala otyheli wekhawuntara wekalika unika imvakalelo efudumeleyo kwisithuba kwaye uzalisekise isiseko esimhlophe. Isiqithi esikhulu sekhitshi sinesinki eyakhelwe-ngaphakathi yodongwe kwaye sihlala kwizitulo ezi-3 zokutya.
Ukuphakama okuphezulu kunye neengcango zeefestile kunye neefestile kunika le ndawo i-classic vibe yangempela. Inemifanekiso eqingqiweyo eneemifanekiso eqingqiweyo, ekhumbuza ngobugcisa bokwakha. Ukutshitshiswa kanye embindini wekhitshi sisiqithi esisekhitshini esine-walnut enesitayile sokugqibela esimalunga nesamente kwaye sigxunyekwe ngombala ofudumeleyo osebenza njengendawo yokubeka imbiza.
I-Sage eluhlaza yayingumbala okhethiweyo kwiikhabhathi zasekhitshini zeli khitshi lesitayile selizwe. Umbala unika indawo ithoni ehlaziyayo kunye nepholileyo, eyenza ibonakale ikhanya kwaye idlamkile kodwa inombala olula emehlweni. Inesiqithi esincinci sekhitshi esakhiweyo esinkini kunye nokugcinwa kunye negranite eluhlaza. Isiqithi sekhitshi sibekwe ngokuchasene nomda owakhelweyo osebenza njengekhawuntara yebar kwaye ugqitywe ngombala ofanayo nekhabhathi.
Elula kwaye intle, eli khitshi libonisa ubuhle beendawo zekhitshi zotshintsho. Imigangatho eqinileyo yomthi ibeka umoya oshushu kunye ne-rustic kwindawo yonke, ngelixa iikhabhathi ezimhlophe ezifakwe ngamaplanga zinika i-classic vibe. Ikhitshi ligutyungelwe ngumphezulu oqinileyo ongwevu kwaye liyigcwalisa ngeethayile ezibuyela umva zeglasi kunye nepateni ye-chevron. Isiqithi sekhitshi sine-sink ephantsi kwentaba kunye ne-chiller yewayini eyakhelweyo. Ikwabonelela ngendawo eyoneleyo yezitulo ezine zebar style.
Iimpawu ze-Neo-classic kunye neenkcukacha zigcwele kuyilo lwekhitshi. Kwaye nangona iikhabhathi eziphambili zasekhitshini zisebenzisa umbala omhlophe ukuphinda-phinda iikholamu zakudala, isiqithi esikhulu sendawo yasekhitshini sihluke kwiikhabhathi eziphambili njengoko sisebenzisa ukugqiba kwe-antique kwikhabhathi yaso kwaye siyiphakamise nge-granite ye-beige ukuze ifane neekhabhathi eziphambili. Isiqithi esikhulu sekhitshi sigxininiswa ngakumbi zii-chandeliers ezimbini, zizisa ukugxila embindini.
Uyilo olumnyama lwamaplanga eekhitshi luzisa imvakalelo entle ekhaya lakho. Eli khitshi liza kujongeka ngakumbi njengoko lisebenzisa ukugqitywa okufanayo kweMahogany kuzo zonke iikhabhathi / isiseko, kunye nokugcizelela okuthe ngcembe kuguqulwe izithuba. Kukho isiqithi esikhulu sasekhitshini embindini, sifakwe inyengane emnyama kwaye sinendawo ethe tyaba yokutya, exhaswa zizithuba ezibini ezikhulu ezijikileyo.
Oku kuhle ikhitshi leenkuni Inoyilo lwembono evulekileyo enemiqadi evulekileyo. Ukubekwa kwisakhiwo sendlu yelog, ukusebenzisa umthi omninzi kunokwenza nje ukuba indawo ibonakale inzima kunokuba sele injalo, ke esi siqithi sasekhitshini sikhethe ukugqiba okumnyama okumnyama ukuze kungafani neendonga zomthi kunye nophahla, kwaye kwangaxeshanye , usahambelana nokuziva okuluhlaza kwendawo. Isilayidi entle yegranite yayisetyenziselwa ukuyibeka phezulu, kwaye yabekwa ngokuchasene nekhawuntara eyakhelweyo eyanceda ukwahlula ikhitshi kwindawo yonke.
Ikhitshi ephefumlelweyo ye-rococo enesikimu sombala wabasetyhini kunye neenkcukacha zegolide ezenziwe ngezinto ezithandekayo. Embindini wekhitshi kukho isiqithi esikhulu sekhitshi esinombala we-rose kunye ne-counter top counter. Inezitulo zebar ezijikelezileyo kunye ne-velvet ebomvu ephothiweyo ukuyinika ukuziva okuhle kunye nokuhomba.
Ngokudityaniswa okufanelekileyo kokugqitywa kunye nezixhobo, le khitshi yakwazi ukufezekisa imbonakalo eyiyo yeediliya. Isebenzisa iikhabhathi ezomeleleyo zelnut kunye noyilo oludityanisiweyo lwepaneli kwaye iluphakamise ngegranite ye-beige ukuyinika imeko entle yomhlaba. Ukutsala, ubhedu olunamafutha lwaluyinto ekhethiweyo. Eli khitshi lide liyise kwelinye inqanaba ngokusebenzisa isinki sobhedu esenziwe ngesando kunye nesigqubuthelo sesiko esikwibhedu yakudala. Oku kugqitywa kwe-rustic ngenene kuvelisa umtsalane weklasikhi wendawo.
Esi siqithi sasekhitshini sisebenza ikakhulu njengaphezulu komsebenzi ongaphezulu. Inqabile kubunzulu kwaye inde kakhulu, ngokugqitywa komdaka omnyama xa kuthelekiswa nokukhanya okukhanyayo kweekhabhathi eziphambili. Yenziwe ngegranite emnyama njengekhitshi lonke kwaye igxunyekwe ngekhandlela langoku elibekwe apha ngasentla kuyo.
Ukusebenza kunye nokukhululeka kolondolozo yeyona nto iphambili kweli khitshi elichaza ukusetyenziswa kweekhabhathi zentsimbi ezingenazingcingo, iikhawuntari kunye nokutshiza ngasemva. Ukufaka isicelo kumakhitshi okuhlala kukhangeleka kubukeka kupholile kwaye kungathandeki, ke ukuze ulungelelanise, isiqithi sasekhitshini sisebenzisa ukukhanya kwesiseko somthi we-beech kunye neetawuli zentsimbi ezingenanto kunye negranite emnyama, okwenza ukujonga okulungelelanisiweyo nobushushu obongezelelweyo bokugqitywa kweenkuni .
Isitayile seshishini sendawo yotshintsho yendawo exuba izinto zeklasikhi ngokugqitywa kwe-rustic kunye neepateni zejiyometri ukwenza imbonakalo yanamhlanje. Iikhabhathi zeenkuni zomthi wom-oki zibukeka zintle ngokuchasene neendonga ezimhlophe ezimhlophe, ngelixa izinto zokubala ezimhlophe eziqinileyo zomhlaba zinceda ukutshintsha ukugqitywa kweekhabhathi kwiichervs ezenziwe ngasemva kwiithayile zokutshiza. Isiqithi sekhitshi sibonakala sithatha inkuthazo kwiithayile ze-chevron, njengoko inemilo eyahlukileyo. Imiphetho ebukhali kunye neeprofayili ezilula zokukhupha i-vibe yanamhlanje, izitulo zebar yentsimbi kunye neplanga ethe tyaba kwisiseko kwelinye icala, inegalelo kwisibheno sayo sorhwebo.
Uyilo lweziqithi zasekhitshini zale mihla zihlala zinombala olula onemigca ecocekileyo nebukhali. Uyilo lwekhitshi ngumzekelo olungileyo onje, obonisa iikhabhathi ezinobumba obukhulu kunye nezinto zokubala ezimhlophe ezimhlophe. Ikhitshi elikhulu linendawo evulekileyo yokuyixhuma kwindawo yokudlela encinci. Isiqithi sasekhitshini esixande embindini sinezinto ezakhelweyo zokupheka zokupheka kunye nee-oveni, ezikuvumela ukuba uzonwabise ngelixa upheka. A usingasiqithi wasekhitshini ngesinki eyongezelelweyo ibonelela ngendawo yokulungiselela ukutya kufutshane ne-oveni kunye nemicrowave.
Uyilo lwesiqithi seKhitshi kunye neefestile ezinkulu lunokuxhamla kwiitoni zokukhanya kwendalo. Uyilo olungentla lubonisa iingcango ezinkulu zeglasi ezityibilikayo zokubonelela ngokukhanya okwaneleyo kwendalo, ngelixa iindonga ezikhanyayo ezingwevu kunye neplanga leplanga lomthi kunceda ukugcina imeko eqaqambileyo. Ikhitshi ligcina ukujonga okucocekileyo kunye nokwala maxesha kwendawo, kusetyenziswa iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini ezinee-quartz ezimhlophe kunye ne-backsplash. Isiqithi sekhitshi sinye, sisebenzisa yonke indawo emhlophe kunye nezitulo ezimhlophe zala maxesha.
Le khitshi yanamhlanje idibanisa umthi omhlophe kunye noweak ukwenza olu luyilo lutsha. Indawo yeekhabhathi ezisisiseko yonke ngomthi oqinileyo we teak ngensimbi engenasici etsala, ngelixa iikhabhathi ezimbalwa zentloko zilaminishwe ngombala omhlophe. Ngokudibeneyo kwiikhabhathi eziphambili sisiqithi esikhulu sekhitshi esinendawo emhlophe eqinileyo yokujonga umphezulu kunye nokulinganisa isitulo esimhlophe sebar.
Ikhitshi elikhulu langoku elipheleleyo elinamaza ahlaziyayo aluhlaza kunye neefestile ezenziwe ngomthi. Iifestile ezinkulu zininzi kweli khitshi, liyenza ibonakale ikhazimla kwaye konga namandla. Ikhitshi lisebenzisa umthi omnye we-teak laminates kuyo yonke indawo kwaye lijongise iinkozo zalo zeenkuni ngokuthe tye ukubonakala ngokwandisa indawo. Iithayile zekhonkrithi zokugqibezela ezingwevu zongeza igrunge kwisithuba, ngokuchaseneyo nomphezulu ogudileyo wee laminates kunye nomphezulu oqinileyo. Kukwakho nesiqithi esikhulu sekhitshi embindini wekhitshi emhlophe i-hob ebekiweyo kwaye ikwahlalisa izitulo zebhar zokutya ngokungaqhelekanga.
Esi siqithi sasekhitshini saseMahogany esigqitywe ngokwenyani sivelile ekhitshini njengoko isiseko saso saseMahogany simnyama kunokugqitywa komlotha wekhabhathi eziphambili zekhitshi. Isiqithi sekhitshi sine-emerald eluhlaza ekhawuntarini phezulu kwaye sakhe ehovini kwaye ujonge isinki, isenza ukuba songezwe ngokufanelekileyo kwaye sisebenze ekhitshini.
Esi sithuba sekhitshi sanamhlanje sihlangene kwaye sibonisa iintlobo ezahlukeneyo zemithi. Imigangatho ekhonkrithi enemibala inika indawo igrunge yemizi-mveliso, ngelixa ucango lwetiakwood kunye neefestile zizisa inkangeleko yetropiki yanamhlanje. Ekhitshini, isebenzisa indibaniselwano yemephu elula kunye neelaminates zomthi wecherry. Ikwanendawo ekhethekileyo yokufaka isilingi egqunywe kwi-mahogany eqinileyo, ngakumbi igxininisa indawo yekhitshi. Kukho nesiqithi sekhitshi ngokunjalo, esiphindaphindayo njengesitena sebhari kwaye sisebenzisa indawo yokuphakamisa indawo yokunceda ukwahlula indawo yekhitshi kuyo yonke indlu.
Esi siqithi sasekhitshini asisebenzi njengendawo yokupheka / yokulungiselela kunye nekhawuntara yokutya, kodwa nokwahlula phakathi kwekhitshi nendawo yokuhlala. Oku kukuvumela ukuba upheke / ulungiselele ukutya kwaye wonwabise iindwendwe zakho ngaxeshanye. Iikhabhathi zekhitshi ezikwisiqithi sisebenzisa iiprofayili zemveli ezinemibala epeyintiweyo ngombala ongwevu okhanyayo kwaye zifakwe imabhile emhlophe. Kanye ngentla kwesi siqithi sasekhitshini yishelufa elijingayo elinentsimbi engenazingcingo kunye neshelf eqinileyo yokugqiba.
Esi sithuba sekhitshi yotshintsho yanamhlanje silungelelanisa ubeko oluvulekileyo oludibanisa ngokuthe ngqo ikhitshi nendawo yokutya. Iikhabhathi zasekhitshini zonke zipeyintwe ezimhlophe ngentsimbi engenasici kunye neentsimbi ezijongeka zilungile ngeendonga ezipeyinti. Isiqithi esikhulu sekhitshi sinendawo yokupheka eyakhelweyo kunye ne-chiller yewayini, isenza indawo efanelekileyo yokulungiselela ukutya ngelixa kusonwabisa iindwendwe.
Isiqithi esikhulu sekhitshi lale khitshi ngokuqinisekileyo sithatha ingqalelo yakho njengoko ngaphezulu kwayo kunye namacala ayo enxitywe ngemabhile emhlophe. Ikhitshi libekwe ngokuchasene nodonga olusisigxina lwe-gypsum, lisenza sizinze kwaye sivumele ingqokelela yemabhile ukuba isebenze njengendawo yokulinganisa. Ekunene ngentla kwesi siqithi sekhitshi zinezibane ezi-3 zala maxesha ezixhonyiweyo eziqinisa esi siqithi.
Ukuya kwiskimu sombala ofanayo kuyo yonke indlu, eli khitshi lihlengahlengisa isikimu sombala omdaka kunye nothule kakhulu. Isebenzisa umthunzi okhanyayo kakhulu ongwevu ofudumeleyo kwiikhabhathi zayo ezigadwe ngamaplanga kunye nokuwuphakamisa ngelitye elimhlophe lesepha kolo jongo luthambileyo. Iindonga zimhlophe kodwa kukho umahluko owaneleyo phakathi kweendonga ezimhlophe kunye neekhabhathi ezikhanyayo ezingwevu. Isiqithi sasekhitshini esixande singena kwizitulo zentsimbi ezine kunye nemisebenzi ikakhulu njengendawo eyongezelelweyo yokugcina kunye nendawo yokulungiselela.
ukuvutha intonga umtshato send off
I-minimalist yanamhlanje ephethe iziqwenga zeshishini kunye nokugqitywa kunceda ukongeza ubuntu ngakumbi kolu luyilo lwekhitshi. Ikhuthazwe ziindawo zeshishini, udonga lwasekhitshini lusebenzisa iithayile zokugqiba zekhonkrithi, zisinika isibheno esirhabaxa kumzi mveliso, kwaye sisebenzisa isitulo sentsimbi esineesitayile sentsimbi ngomthi ophezulu. Inesiqithi sekhitshi esixande kunye ne-mahogany laminate emnyama kwisiseko sayo kwaye ine-marble carrara.
Olu lolunye uyilo lwekhitshi oluncinci lwangoku olusebenzisa iikhabhathi ezimhlophe ezinamacala amhlophe njengoko iindonga zesithuba zazipeyintwe ngombala ongwevu wompu. Isiqithi sasekhitshini eside nesimxinwa esine-top marble counter sinceda ukwahlula indawo yokutyela ekhitshini, kodwa ivumela ukufikelela ngokulula kunye nokujonga kwezi ndawo zimbini.
Eli khitshi lisebenzisa iikhabhathi ezimnyama ezinamafutha omnyama ezinobumba omnyama nomhlophe wegranite ezibekwe kwiindonga ezimhlophe ezimhlophe kunye nelitye elikhanyayo le-beige emva kweetayile. Ikhitshi emile njengo-L inesiqithi esincinci sekhitshi kunye nesinki encinci engaphantsi kwentaba ebekwe kwindawo yokuhlala emnyama ye-walnut yendawo yokuhlala encinci.
Olu lolunye uluvo lwekhitshi elidlulileyo, kwaye lubonisa ubume bekhitshi evulekileyo enxibelelene nendawo yokutyela ngokusesikweni ngokuvulwa okukhulu kwe-arched, kuyenza ibonakale inkulu kwaye iphangalele. I-oveni eyakhelweyo ngaphakathi inokubonwa nakwisiqithi sekhitshi, kwaye ikwanyanzeliswa nge-chandelier yentsimbi, ikhuphe ukukhanya okufudumeleyo okuthambileyo, ithambise inkangeleko yendawo.
Iikhabhathi ze-oki zakudala zijikeleze eli khitshi lipheleleyo, lenza i-vibe entle kunye neklasikhi kwindawo. Embindini wekhitshi kukho isiqithi sasekhitshini esixande esimi ngaphandle ekhitshini lonke njengoko sinesiseko esimhlophe endaweni yokusebenzisa um-oki omnyama. Isebenzisa itafile enye yetyuwa kunye nepepile yegranite kunye nekhitshi lonke, iyenza ibonakale ibekiwe kakuhle nangona kugqityiwe.
Le khitshi inkulu evulekileyo ithatha ukukhuthazwa kuyilo lwe-Neo-classic, kusetyenziswa iikholamu ze-faux kunye ne-classical motifs kwiikhabhathi zasekhitshini. Ngelixa iikhabhathi eziphambili zisebenzisa ukugqitywa kweenkuni ze-teak eziqinileyo, isiqithi esikhulu sekhitshi sipeyinta ivazi yayo ngombala omhlophe, siyenze ibonakale ikumgangatho oqinisekileyo. Uyilo lwesiqithi sekhitshi ngolu hlobo ngesinki esingaphantsi komhlaba kunye neprofayile ebanzi inokuhlala abantu abane okanye ngaphezulu izitulo zebha, iyenza isebenze kakhulu ukulungiselela ukutya kunye nokutya.
Esi siqithi sasekhitshini esinompheki owakhelweyo ngaphakathi kunye nesilayi e-emerald yegranite ayisebenzi njengekhitshi lekhitshi kuphela, kodwa ikwindawo yokubala kunye nendlela yokuhombisa ikhitshi kuyo yonke indlu. Iikhabhathi zekhitshi zazihlanjwe ngombala omnyama wamandongomane, zisenza ukuba sikhangeleke njengokhuni oluqinileyo nokuba ngaba yiplywood eyenziwe ngeribhoni kuphela. Oku kubangela ukungazami kunye nohlahlo-lwabiwo mali olunobuchule ekhitshini.
Iindonga ezityheli ze-beige kunye nemigangatho iseta umoya ofudumeleyo kwisithuba esijongeka sigqibelele ngombala omhlophe opeyintiweyo wesitayile sekhabhathi. Ngokuhambelana nekhabhinethi ephambili sisiqithi esineekhitshi esinezihlalo ezine zokugqiba izitulo zebha. Esi siqithi sasekhitshini sisebenza ikakhulu njengendawo yokulungiselela eyongezelelweyo kunye nendawo yokutya eqhelekileyo.
Eli khitshi liya kwiskimu sombala ongwevu nomhlophe, sisebenzisa iikhabhathi zekhitshi ezingwevu ekuphakameni ngentloko yekhawunta emhlophe. Kukho isiqithi esikhulu sekhitshi esine-sink engaphantsi kwentaba kunye nokuhlalisa izitulo zebar zendlela ezi-4.
Umdibaniso wemibala kunye noburhabaxa kweli khitshi lenza ukuba libukeke lilungile kwaye lihle ngaphandle kokuya ngaphezulu. Iikhabhathi zekhitshi ezenziwe ngamaplanga zikwimeko emnyama kwaye zine-granite ye-beige, ngelixa i-back splash isebenzisa iithayile zamatye endalo, inika ubume obunomdla. Isiqithi sekhitshi side kwaye sincinci, sine-beige top kunye nesinki engaphantsi kwentaba. Ikwahlala kwakhona izitulo zebha ezi-4 kunye nokugxininiswa kwezibane ezigqityiweyo.
Eli khitshi linemigca encinci linesiqithi esincinci sekhitshi esinki yokuntywila. Isiqithi se-mahogany sokugqiba ikhitshi sibekwe kudonga lwe-gypsum eyakhelweyo kunye ne-beige granite. Isiqithi sekhitshi sinikwa ugxininiso ngokubeka izibane ezintathu ezijingayo ngaphezulu kwayo ukongeza kwizitulo zebar ezintathu.
Iithayile zomgangatho webhodi eluhlaza kunye namhlophe sele zinika eli khitshi ukuba ukujonga okwenyani kwe-retro njengemigangatho yokujonga ibhodi yomtsalane yayithandwa ngasemva kwemini, ide yaboniswa nakweminye imizobo eyaziwayo yamandulo. Iikhabhathi zasekhitshini ezisetyenzisiweyo zineprofayili enamacwecwe enziwe ipeyinti emhlophe, enombala ogqunywe ngegranite eluhlaza. Isiqithi sekhitshi kwelinye icala, sisebenzisa isiseko esine-antiqued green end, esinika eso sibheno se-rustic.
Oku kuqhelekile Ikhitshi elimile L ibekwe kuyilo oluqaqambileyo oluvulekileyo ludibanisa imibala emi-2 yekhabhinethi. Iikhabhathi eziphambili bezimhlophe, ngelixa isiqithi sasekhitshini sisebenzisa i-redwood laminates. Izinto zokubuyela umva zizitayile zangaphantsi ezingwevu eziluhlaza kunye nelizwi eliphantsi elipholileyo elingqinelana nethoni yesilayidi esisetyenzisiweyo. Isiqithi sasekhitshini asinazo naziphi na izinto ezakhiweyo, kodwa singqina ukusebenza ngokukuko okuphezulu kunye nendawo yokudlela encinci.
Into eyahlukileyo ngeli khitshi kukuba sisiqithi sekhitshi silungisiwe kwaye asinako ukugcinwa ngaphantsi. Endaweni yoko isebenzisa umngxunya-ongundoqo osisiseko esifana nezinto kunye nokugqitywa okusetyenzisiweyo ezindongeni, kugqityiwe ngamashishini kunye nakwibhodi esezantsi. Umphezulu wekhawuntara usebenzisa i-granite ye-beige kwaye ayinasinki ngokupheleleyo okanye nasiphi na esinye isixhobo sekhitshi, esenza ukuba isebenze kuphela njengomsebenzi owongezelelweyo ophezulu okanye indawo yokutyela.
Ngelixa iikhabhathi eziphambili zekhitshi zelikhishini lesitayile selizwe zisebenzisa iikhabhathi zokugqibela ze-oki kunye neprofayili yesimbo sendabuko, ikhitshi lesiqithi / ibar counter lilandela imilo eyahlukileyo. Esi siqithi sasekhitshini sinobume obuguquliweyo be-S nge-ash grey weather woo base ene-beige granite. Ikwanayo nekhawuntara yamanqanaba amaninzi, ikhawuntari esezantsi inokuphakama kwekhawuntari yekhitshi, kwaye ephezulu yeyokuphakama kwebar counter ukuyenza ilungele izitena zeenkuni zeenkuni ezinezihlalo ezikhawulezayo.
Iifinishi ezimnyama zeengqimba zomthi oqinileyo zinika eli khitshi umtsalane weklasikhi kunye nembonakalo entle. Isiqithi sekhitshi esisetyenziswe kolu luyilo sinamanqanaba amabini. Ukuphakama kwekhawuntari kwesiqhelo kusebenza njengendawo eyongezelelweyo yokulungiselela ukutya ngelixa ikhawuntari ephezulu egqitha kuyo isebenza njengendawo yokulwa yevar. Zonke iindawo eziphezulu zokubala zisebenzisa i-granite ye-beige kunye neprofayili yeklasikhi ukuhambelana ngokuchanekileyo kunye neekhabhinethi zeklasi.
Ngaphandle kokuba incinci, le khitshi yesitayile yala maxesha iyakwazi ukulingana kuzo zonke izinto eziyimfuneko ekhitshini ngocwangciso olusebenzayo / ngobume bembombo. Ngelixa iikhabhathi eziphambili ezikhanyayo ezingwevu ezifudumeleyo zihlala kwifriji kunye noluhlu, isiqithi sekhitshi esine-Mahogany base sinesinki eyakhelwe-ngaphakathi yodongwe kwaye ikwabonelela ngobungqongqo kwikhawuntara yayo yegranite kwizitulo zebha ezi-3 eziphakanyisiweyo.
Uphahla oluphezulu kunye neefestile ezinkulu zemifanekiso zibonelela ngesi sithuba kungekuphela ngumbono omkhulu, kodwa zikwanika nomoya oqaqambileyo, ngaphandle kokusebenzisa imigangatho emnyama yomthi. Isiqithi sasekhitshini, nesiseko saso esimnyama esimdaka kubonakala ngathi sidibanisa imigangatho, ngelixa umphambili waso obomvu oqinileyo obonakala ngathi udada phakathi kobumnyama.
Iziqwenga zomthi eziqinileyo ezidityaniswe nezixhobo zentsimbi zenza ukubukeka okuqinisekileyo kweli khitshi. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi zisebenzisa iinkuni eziqinileyo ezinamabala kunye ne-beige granite counter top, ukuyinika umhlaba kunye nokuziva ngathi kurustic. Isiqithi sekhitshi kwelinye icala, sinoyilo olwahluke kakhulu. Isiseko sisisiseko esithile, kunye nokugqitywa kwepeyinti emnyama emnyama kwisiseko esinezinto ezithe nkqo kunye nekhawuntala yelitye lekalika. Yintoni eyenza ukuba yahluke kwaphela, kukusetyenziswa komgqomo wewayini yeediliya ukwenza isiseko sebali ekhawuntareni exhunywe kwisiqithi sekhitshi. Kujikeleze i-1/2 yomgqomo usikiwe kwaye wanamathela kwisiqithi, emva koko wafakwa ngomthi oqinileyo osisetyhula.
kuchaphulo olu cute ukuthumela intombi yakho
Eli khitshi linophahla olwahlukileyo, olunombhalo ocacileyo wokhuni kunye nezibane ezixhonyiweyo zesilingi ezidumileyo kwiindawo zangoku zeshishini. Iskimu sombala, ukugqitywa kunye nesitayile esisetyenzisiweyo ekhitshini, nangona kunjalo, kungcatsha olu khuthazo lweshishini kwaye luguqulele kwisitayile sotshintsho lwangoku. Iikhabhathi zasekhitshini zonke zimhlophe ngezinto zokubala zegranite, ezenza ukuba zibukeke zililizwe elingaphezulu kwelamashishini. Embindini wekhitshi kukho isiqithi esikhulu sekhitshi esinendawo yokugcina eninzi, enezinto ezomeleleyo zokubamba iinkuni, kwaye inendawo encinci yokuphakamisa ibha.
Ikhitshi le-rustic yeklasikhi ene-oki yomthi eqinileyo iikhabhathi zasekhitshini ziyinika isibheno esiqinileyo nesingapheliyo. Kukho isiqithi esikhulu sekhitshi embindini ogxininiswe nge-chandelier yentsimbi. Esi siqithi sasekhitshini sineenkuni eziqinileyo, isiphelo esifanayo njengesiseko kwaye sinendawo eyakhelwe-ngaphakathi phantsi kwesinki yentaba.
Ndwendwela igalari yethu Izimvo zesiqithi sekhitshi ngeendlela ezininzi zoyilo zokuphefumlela.
Utata olungileyo intombi yomtshato
Iimpahla zokunxiba zabafazi kwimitshato
imitshato ukufundwa kwibhayibhile
umzekelo wewebhusayithi yomtshato weqhina